Raiisul wasaare Cali Maxamad Geddi oo baarlamaanka ka raadinaya Kalsooni codeed.
Ra'iisul wasaare Cali Maxamad Geddi oo baarlamaanka ka raadinaya Kalsooni codeed.
Isniinta soo socota ayaa la qorshaynayaa in Baarlamaanka la hor keeno ra'iisul wasaare Geeddi...
Cali Maxamad Geedi wasiirka koowaad ee Dowladda FKMG ah ee soomaaliya oo dib loogu soo celiyay jagadiisii ka dib markii uu baarlamaanka cod uu ka waayay sidaasna ay ku rideen dowladii uu soo dhisay ayaa hadda wada dadaal dheer oo ugu jiro in uu helo codad ku filan oo uu ku kasbado kalsoonida baarlamaanka ka hor inta uusan hortagin.
Wasiirka ayaa kulamo la leh qaar badan oo ka mid ah baarlamaanka isagoo xalay casho sharaf u sameeyay qaar ka mid ah beelaha soomaaliyeed si uu u hanto codkooda, kuwo la mid ah kuwan ayaa ka dhex wadaa baarlamaanka beelaha uu ka koobmo ee shanta beelood loo kala qaybiyo.
Cali Maxamad geddi,in badan oo ka mid ah baarlamaanka ayaa ku tilmaamay inuusan la tashanin taladii uu ka qaadan lahaana beel ahaan uu ka qaato dad kale sidaasna ay keentay in uu kala kulmo kalsooni daro,sidaasna ay ku rideen waxaana intaas u dheeraa iyagoo ku tilmaamay in uusan tixgalin siinin baarlamaanka guud ahaan.
Codkii kalsoonida darada ee lagu riday ayuu maanta ka raadinayaa baarlamaanka isagoo waliba u adeegsanaya dad ku dhaw oo ay ka mid yihiin Maxmad dheere,iyo Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmad,waxaana ay sheegayaan ilo xog-ogaal ahi in ay jirto lacag ay bixisay dowladda Itoobiya oo codka looga kambayn garaynayo Cali M.geddi si ay baarlamaanku u siiyaan codka kalsoonida.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa la damacsanaa in la geeyo wasiirka koowaad baarlamanka hortiisa si ay u ansaxiyaan una siiyaan codkooda si uu u soo dhiso dowladda.balse waxaa ka dhashay culays waxaana dib loo dhigay horgaynta baarlamaanka ilaa inta laga xalinayo meelna looga soo hubsanayo codadka uu heli karo tiradooda,si uusan markale u waayin kalsoonida baarlamaanka.
Waxaana dib loogu dhigay illaa isniinta ka horna waxaa socda dadaalo waanwaaneed oo looga raadinayo baarlamaanka in ay siiyaan kalsoonidooda cali maxamd geddi.
Aan ku bilaabo qormadaydee, markii mudo hada bil iyo baryo laga joogo lagu dhawaaqay in Soomaaliya dowlad federaal ah u dhalatay, ayaa soomaalida ku dhaqan dunida afarteeda gees badankoodu u riyaaqeen dowladaas. Dowladaa oo la dhihi karo waatii kali ahayd ee burburkii kadib hanatay kalsoonida bulshada inteeda badan, ayaa noqotay � la mood noqonse wayday� kadib markii rag baarlamaanka ka ku jira ay hardan, sabaaxato, feer, laad iyo lagdan isula tageen.
Waxaa maalin dhawayd anoo kujira mid ka mida webabka soomaalida, ishaydu ku dhacday � war deg deg ah� waa fiirshay mise waa xildhibaanadii oo is laayey. Runtii ma nixin mana farxin waxayse igu noqotay � nabar aan filaayey naxdin mooyee naaqus maleh� waxaana waliba is iri, maxaa kuxigidoona? Mise tii xigtay waa dawladii oo laga takhalusay iyo in hada iyo hor mid lasoo dhiso. Saa waxaa igusoo dhacday oraah nin laga sheegay oo uu yiri � walee waa yaab� Yaabkaas waa tay ka dhihidoonaan dowlada lasoo dhisidoono iyo inay sabaaxatada biisi doonaan iyo in kale.
Waxaa wax lala yaabo iyo waliba nasiib daro ah, in dadkii laga sugayey inay hagaag shicib gacantoodu dhac iyo dil baratay, baraana sida dhac la�aan iyo dil la�aan loo noolaado inayba ayagii u bilaabeen in is farasaar wax lagu qaybsado. Waxaan waydiin lahaa ragas isku rifay dalka ay koytada kuyihiin, maxaad samayn lahaydeen hadaad dalkii joogi lahaydeen? Jawaabta anaa isasiiyey waxayna noqon lahayd, baroon iyo bii�em
� Kala danbaynta
� Sida wax loo maamulo
� Sida hadaa wax tabanayso afka looga hadlo
� Taariikhdu intay marayso iyo in laga ilbaxay gacan kahadalkii
� Micnaha wadaniyada
� Is xurmaynta iyo is xaqdhawrka
� In umad iyo dal dacdaroobay idin sugayaan, kana muhiimsanyihiin wax yaabaha aad isku jiid jiidanaysaan
� Agoon cayr ah
� Hooyo gablan ah
� Waayeel rafaadsan
� Dhalinyaro mustaqbal la�
� Kuwo inay gaaloobaan ama dhaqama kale qaataan qarka u saaran
� Dal burburay
� Dad barakacay
� Calankii oo ku dhow in la ilaawo suu u ekaaba
� Dalkii Soomaaliya la oran jiray oo aan waxba uga harsanayn inuu noqdo kudaafad lagu tilmaamo, waabaa dad caadiya ku noolaan jireen hadase, waxaa dagan dadqalo.
Runtii idinma abhin karo oo hadaa diin xaqdhowraysaan sida xaalyahayba ma noqoteen, waxaanse si naxariisleh idiinka codsanayaa, dal la�aan baad nadhigteen oo dal aanaan lahaynbaan qaxooti kunahee dad la�aana hanoogu darina oo markaad noqotiin inta hartay bumbo iyo balaayo ha iskugu dhiibina.
Waxaan markale idinleeyahay hadaad dad naxaya tihiin oo intay doontaba ha le�ekaatee wali uun diiraysaan, sida u dhaama dadka iyo dalka mucjisaysanee la dhaygagsan dhibaatada aad idinku u horseedeen
Gabagabadii waxaan dadka soomaaliyeed usoojeedin lahaa, inaysan u danayn qabiil iyo qurun balse ayagu dantooda gartaan. Dantiida garta oo yaan maskaxdiina lagu xadin waa layna qadshay iyo cid hebelbaa rabta inay ina xukumaan. Meesha wax ka socon la�yihiin waa qaabfikirkeenoo qolo aan jixinjixin furaheeda qaadatee hooy sidaan dan inoo kuma jirto. Illaha awooda leh waxaan ka barayayaa inuu il naxariisleh ku eego dadkiisaas inkaartu iskaga dhacdee gees maray amarkii ahaa iga danbeeya dadkaygow ee aan waliba lahayn indho ay ku arkaan cadawgooda ayaguse isku cadowgaa.